စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 2/08/2011 11:32:00 PM
မနက်ဖန်တွေ ကြောက်တာချင်း တူ၏
9/2/11 1:06 AM
တစ်ခါတစ်လေ အသိစိတ်က လက်မခံချင်ဘူး..
အတွင်းထဲမှာ ရှိနေတာက တစ်မျိုး...
ဘာကိုမှနားလည်စရာမလို...ဒါပေမဲ့ ရင်ခုန်နေသူ :)
11/2/11 11:47 AM
*** Sidebar က ရှင်းလင်းချက်ကို သိပ်ကြိုက်တယ်...
11/2/11 3:44 PM
14/2/11 12:53 AM
မရေရာတဲ့ မနက်ဖန်များစွာကို မသေမချာနဲ့ လွမ်းနေမိတယ်.
မယ့်စာလေးဖတ်ပြီး ခံစားမိတဲ့ ရင်ထဲက စကားလေးတစ်ခွန်းပါ။
16/2/11 3:01 PM
ဗန်းပြထားတဲ့ စာနာမှုတွေကို ညီမလေးလဲ မုန်းတယ် မယ် ..
ရှင်းလင်းချက်ကိုတော့ ကြိုက်တယ် မယ် ။ တခါတခါ ထင်ချင်ရာထင်ဆိုပြီး ဘာကိုမှ မမှုပဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲ အသက်ရှုချင်တယ် ....
အရမ်းကောင်းတယ်..ဖတ်ပြီးတော့ ရင်ထဲမှာ ဟာသွားသလို.
မမရေ တစ်ချို့ကိစ္စတွေအတွက် အသက်ရှူကြပ်မနေပါနဲ့နော်...
17/2/11 8:23 AM
ဘယ်သူမှ ဘယ်သူ့ကို ဘာကြောင့်မှ နားလည်စရာမလို တဲ့ ကြိုက်လိုက်တာ အဲ့စကားလေး..။
ညီမလေး နေကောင်းလား..။ မရောက်တာကြာပြီ။ အစစအဆင်ပြေတယ် ဟုတ်?
19/2/11 11:02 PM
6/4/11 9:33 PM
မနက်ဖြန် အတွက်မစဉ်းစားချင်ပါဘူး မမကိုး ရယ် တကယ်ပါ
hope ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ရယ် furture ဆိုတဲ့ အနာဂတ် ရယ်က သမီးရဲ့ မာနနဲ့စောင့်စားမှုကို ရိုက်ချိုးခဲ့တာ ၂ ခါ တိတိ တောင်ရှိခဲ့ပြီ မမ
သမီး ဆက်မမိုက်တော့ဘူး ဒီတော့ ဘာကိုမှ မမျှော်လင့်တော့ပါဘူး မမ ရယ်
7/4/11 9:21 PM